Dhagayso: Abuu Muscab Oo ka warbixiyay Howlgalladii ugu dambeeyay.
Saturday May 11, 2019 - 22:15:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Afhayeenka Taliska milliteriga ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cabdil-caziiz Abuu Muscab oo shir jaraa'id warbaahinta u qabtay ayaa ka warbixyay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiinta fuliyaan.
Afhayeenku wuxuu si gaar ah uga hadlay howlgal ka dhacay afaafka hore ee magaalada Buula-mareer, kaas oo lala eegtay saraakiil katirsan ciidamada Shisheeyaha qeybaha miina baarista, iyo sidoo kale howlgal kale oo ka dhacay gobolka NFD.
Wuxuu sidoo kale ka hadlay, howlgal kale oo qaraxyo ah kaas oo ka dhacay nawaaxiga degmada Wallaweyn ee Shabeellaha hoose, kaas oo lagu gubay gawaari muhiim u ahaa ciidamada Shisheeyaha.
Dhina kale, sheekh Cabdil-caziiz Abuu Muscab, wuxuu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ka fuliyeen gobolka NFD, wuxuuna sheegay in howlgalladaas ay khasaare ku gaarsiiyeen ciidamada Kenyaatiga, kuna furteen dhowr qori.
Halkan ka dhagyaso Warbixin ku aadan shirka jaraa’id ee Sheekh Abuu Muscab.
Abiy Axmed oo ku dhawaaqay in labuuxiyay biya xireenka Al Nahda.
Ciidamada Jabuuti oo xiray garoonka diyaaradaha Beledweyne.